FAQs - D&L Maindasitiri Uye Kutengesa (Xuzhou) Co. Ltd.
Ndinogona here kuisa yangu logo pamasikati ezuva?
Hongu, tsika logo inowanikwa.
Ndeipi faira yandichada kutumira kwauri?
AI kana PDF
Semuenzaniso mutengo unodzoserwa kana kwete?
Ehe, iwo mashoma odha huwandu kubva kuchitoro ndeye 2 · 10pcs.
Ndezvipi zvakanakira mirati yakaratidzwa lenzi?
Mavhenekeri emalensi ane anoratidza ekupfekedza ayo anoderedza huwandu hwechiedza chinopfuura uchipinda muziso.
Ndezvipi zvakanakira gradient lenses?
Gradient lenses inodzima kubva kune yakasviba tint kune yakareruka tint, ichibvumidza iyo confortable xision pamusoro penzvimbo dzakasiyana dzedaro nemwenje mamiriro.
Ini ndinofanira kuchengeta sei magirazi angu ezuva?
Kuchengeta magirazi ezuva ako akachena pamwe nekuvabatsira - uye iwe - unoratidzika zvakanaka uye unoita mushe. Nekudaro, magirazi ekudzivirira eprimiyamu uye kunyanya malenzi avo anoda kurapwa kwakangwarira. Kuchengetwa zvisirizvo kunogona kukuvadza lenzi, zvichikonzera kukwenya kana kuita husimbe, izvo zvinokonzeresa eyeestrain.
Nekudaro, nzira yakanakisa yekuchenesa magirazi ezuva nderekudzora zvinyoronyoro nejira rekuchenesa lens uye yekuchenesa mvura yakanyatsogadzirirwa malenzi eziso, kana neine-yakasungirirwa lenzi yetelete.
Kuti udzivise kukuvara, usambochenesa magirazi ako ezuva nemapepa emapepa kana zvipfeko, izvo zvinogona kukuya guruva nefibisi mumalensi uye kusiya mavanga. Uyezve dzivisa kushandisa sipo yekugeza kana sipo. Nepo sipo shoma dzakapfava dzisingakuvadze lenzi, nhasi sipo dzekuwedzera dzesimba dzine simba rakaringana kupatsanura kupfeka kwema lens zvishoma nezvishoma. Magirazi ekuchenesa anonyanya kukuvadza uye anogona kukuvadza malenzi ako nekukurumidza. Izvo hazvina kugadzirirwa kushandiswa pane zvisiri-girazi lens zvinhu zvinoshandiswa mumirazi yezuva.
Kunyangwe pasina chimwe chezvinhu izvi chichaita nekukurumidza kukuvara kune pfungwa dzako, nekufamba kwenguva uye nekudzokorora, kukuvara kunozoonekwa.